मेरो निवेदन कता हरायो मेयरसाव ? « Loktantrapost
मेरो निवेदन कता हरायो मेयरसाव ?
श्रद्धेय मेयर विमल आचार्यज्यू,
मेचीनगरबासीको अभिमत जितेर मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि तपाइँ आम नगरवासीको आशा, भरोसा र अभिभावकको रुपमा सम्मानित हुनु भएको छ ।
एउटा आम नागरिकको रुपमा तपाइँप्रति मैले जुन विश्वास गरेको थिए, तपाइँको अभिव्यक्तिमा पटकपटक जुन आश्वासन पाएको थिएँ, त्यो व्यवहारमा परिणत नभएकाले पत्रिकामार्फत यो चिठी लेख्न विवश भएको छु ।
सर्वप्रथम म तपाइँलाई २०७४ साल भदौ १ गतेको एउटा क्षण सम्झाउन चाहन्छु । त्यो दिन मैले एउटा निवेदन लिएर तपाइँकहाँ पुगेको थिएँ । निवेदनमा मेचीनगर ९, १० र ११ को सीमानामा पर्ने टिमार्इँँ खोलामा रहेको पुलमा तारजालीको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको थिएँ ।
त्यो पुल हजारौ नगरवासी ओहोरदोहोर गर्ने पुल हो । गत बर्षको बाढीले किनारामा रहेको तारजाली बगाएपछि आगामी बर्खामा पुल नै बग्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेर मैले तारजालीको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको हँु । मलाई मेरा गाउँलेहरुले नै सल्लाह गरेर तारजालीको माग गर्न लगाएका हुन् ।
तपाइँ एउटा विकासप्रेमी मेयर भएकाले मेरो निवेदनमाथि अवश्य सुनुवाई गर्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ मैले । तपाइँले नै तोक लगाएको सो निवेदनको हालसम्म सुनुवाई भएन, किन ? यही मेरो प्रश्न हो ।
निवेदनको सुनुवाई नभए पछि मैले तपाइँलाई फोन गरेर निवेदन र माग बारे पटकपटक स्मरण गराएको छु । पहिलोपल्ट फोन गर्दा तपाइँले ‘हुन्छ यो काम हामी गरिहाल्छौँ, मङ्सिर ५ गतेसम्म पर्खनुहोस्’ भन्नु भयो । मैले पर्खे ।
त्यसपछि फेरि फोन गरेर स्मरण गराएँ । तपाइँले ‘चुनाव आइहाल्यो, त्यसपछि हेरौला’ भन्नु भयो । चुनाव पनि सकियो, मेरो निवेदनको सुनुवाई भएन ।
तपाइँकै सल्लाह बमोजिम मैले वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष गोपाल खड्कालाई पनि पटकपटक यस बारेमा झक्झक्याए । उहाँले पनि ‘भैहाल्छ, भैहाल्छ’ मात्र भन्नु भयो । काम हुने कि नहुने कुनै टुङ्गो भएन ।
विहीवारको लोकतन्त्र पोस्ट दैनिक विहानै घरमा पढ्दा पो थाहा पाएँ–हाम्रो वडामा विकासका योजना छनौटका विषयमा भेला पनि भइसकेको रहेछ । हाम्रो वडामा भेला हुँदा हामीले नै थाहा नपाउने अवस्था किन भयो ? के हामीले हाम्रा कुरा वडा भेलामा वडाबासीको तर्फबाट राख्न मिल्दैनथ्यो ? भेलाको जानकारी नदिइएकोमा मलाई ज्यादै दुःख लागेको छ ।
यदि भेलाको जानकारी पाउन सकेको भए म त्यो पुलको तारजालीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने थिएँ । मेरा गाउँलेहरु पनि अहिले सुटुक्सुटुक् वडा भेला भइरहेको छ अरे भनेको सुनेर छक्क परेका छन् । हामी सोझा सिधा जनताले थाहा पाउन नहुने त्यो कस्तो वडा भेला हो ? तपाइँहरुको यस्तो कामले चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरुप्रति जनाक्रोश बढेको छ ।
म त एउटा सामान्य नागरिक हुँ । म कुनै पार्टीको नेता वा ठप्पा लागेको कार्यकर्ता होइन । गाउँको विकास निर्माण कसरी गर्ने र कुन योजना अघि बढाउने भनेर हामी सोझा सिधा जनताले भन्न नपाउने हो अब ? पाउने हो भने किन वडा भेला हामीले थाहा पाएनौँ ? केही ठूलाठालुले मात्र थाहा पाउने भेलाले पास गरेका योजना मात्र स्वीकृत हुने हो भने यो देशमा जनताको शासन लोकतन्त्र आएको छ भनेर किन भन्ने !
वडाध्यक्षले फोन गरेर डाकेका सीमित मान्छे बसेर योजना छनौट गरिएका छन् भन्ने सुनेको छु । मेरो वडामा कृपापूर्वक आम वडावासीको सहभागिता सुनिश्चित गरेर अर्को वडा भेला बोलाउने व्यवस्था मिलाइदिनु होस्, ताकि मैले मेरो गाउँको पुलमा तारजाली गर्ने माग फेरि सुनाउन पाउँ ।
(निवेदन दर्ता नं. ५७२)